विचित्र Archives | Page2of3| Kendrabindu Nepal Online News
अचम्मको सनक : एक राजाका ३ सय ६५ जना रानी
हिजोआज मानिसले एकभन्दा बढी विवाह गर्ने सोच्न पनि कठिन छ किनभने यो गैरकानुनी हुन्छ । एकभन्दा धेरै विवाह गर्नुलाई कानूनले नै निषेध गरेको छ । यद्यपि पत्नी वा पतिसँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेको अवस्थामा भने अर्को विवाह गर्न वाधा हुँदैन । बहुविवाह
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १८:५२	२५ पुष २०७६, शुक्रबार १८:५२
माइनस ५२ डिग्रीमा म्याराथन
जाडो मौसम लागेसँगै संसारका अधिकांश भूभागहरूमा चिसो सुरु भइसकेको छ । अझै हिमपात हुने भूभागहरूमा तापक्रम माइनसमा पुगिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा अत्यधिक चिसो हुनुका साथै हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । काठमाडौंको तापक्रमकै कुरा गर्ने हो भने पनि
१३ पुष २०७६, आईतवार १७:१५	१३ पुष २०७६, आईतवार १७:१५
१७ सय वर्ष पुरानो रोमन अण्डा फेला पर्‍यो
सृजना राई सन् २००७ र २०१६ बीच पुरातत्वविदहरुले मध्य इङ्ल्याण्डमा ‘बेरीफिल्डेस ’ भनिने रोमन बस्ती उत्खनन् गरे । स्मिथ सोनियन संस्थाका अनुसार १७ सय वर्षसम्म चारवटा कुखुराको अण्डालाई पानीले भरिएको खाडलमा जोगाइएको थियो । जसमध्ये केही दुर्घटनावश चर्किए । साथै
७ पुष २०७६, सोमबार १२:५६	७ पुष २०७६, सोमबार १२:५६
दुलहीले लगाइन् गोलभेडाको गहना !
पाकिस्तान, केही दिनयता पाकिस्तानकी एक दुलही सोसल मीडियामा चर्चामा आएकी छिन् । यी युवती यस कारणले चर्चामा आएकि हुन् कि उनले लगाएको गहना गोलभेडाको हो । यी दुलहीले विवाहमा गोलभेडाको गहना लगाएकी थिइन् । किन गोलभेडाको गहना लगाएको भन्ने प्रश्नको
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:२८	६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:२८
एक यस्ता युवक जो हरेक दिन नयाँ मानिससँग मित्रता गाँस्छन्
मानिसको सोख पनि अचम्म अचम्मको हुन्छ । अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा बस्ने २८ वर्षीय रब ललेसको पनि अचम्मको सोख छ । उनी हरेक दिन कम्तीमा पनि एकजना अपरिचितसँग कुराकानी गर्छन् । ललेसले सन् २०१५ देखि यस्तो गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म ललेसले २८००
७ आश्विन २०७६, मंगलवार १३:४८	७ आश्विन २०७६, मंगलवार १३:४८
अस्पताल परिसरको बिरुवा खाइदिएपछि दुई वटा बाख्रा प्रहरी हिरासतमा !
भारत, सुन्दा पत्याउन नसकिने जस्तो लाग्छ तर यो सत्य घटना हो । भारतको तेलंगना राज्यमा दुई बाख्रालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । बाख्राहरुले अस्पताल परिसरको भर्खर रोपिएका बिरुवा खाईदिएको आरोप थियो । रुख बचाऔं अभियानका कार्यकर्ताहरुले चरिरहेका बाख्रालाई समातेर प्रहरीमा
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:४१	३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०८:४१
जब बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्रीको घरमा भएको सुनको ट्वाइलेट चोरी भयो…!
लण्डन, सुनका गहना चोरी भएको समाचार त आइरहन्छन् । इङ्ल्याण्डमा भने सुनको ट्वाइलेट नै चोरी भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । इङ्ल्याण्डको अक्सफोर्डसायरस्थित ब्लेनहेइम प्यालेसबाट सुनको ‘कमोड’ चोरी भएको हो । समाचार अनुसार बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल जन्मिएको घरमा
२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:५८	२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:५८
३ सय २६ जना सवार विमानमा कफी पोखिएपछि….
तीन सय २६ यात्रु सवार विमानको कन्ट्रोलरमा कफि पोखिएपछि विमान आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । यस घटना गत फेब्रुअरी ६ तारिखको भएको जर्मनीस्थित एयर एक्सिडेन्ड इन्भेस्टिगेसन ब्रान्चले जनाएको छ। एयरबस ए३३०–२४३ जर्मनीको फ्रान्कफुर्टदेखि मेक्सिकोका लागि उडेका थियो । विमानमा ४९
२८ भाद्र २०७६, शनिबार १४:२१	२८ भाद्र २०७६, शनिबार १४:२१
अमेरिका जान यस्तो हर्कत, उमेरदेखि भेष समेत फेरबदल
अमेरिका जान मान्छेले कतिसम्म हर्कत गर्छन् भन्ने कुरा भारतका एक युवाले पुष्टि गरेका छन्। भारतका ३२ वर्षीय जयेश पटेल अमेरिकाको न्युयोर्क जान आफ्नो उमेर ८१ बनाएका छन् । उनले उमेर मात्रै बढाएका छैनन् आफ्नो शारीरिक भेष समेत सोही अनुसार बदलेका
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५४	२६ भाद्र २०७६, बिहीबार १०:५४
जन्मिएको ३ दिनमै अनौठो शिशुको मृत्यु
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा जन्मिएको अनौठो बच्चाको तीन दिनमै मृत्यु भएको छ । गत बिहीबार बेलडाँडी गाउँपालिका ४ वैवाहकी २६ वर्षीया महिलाले जन्माएको अनौठो शिशुको मृत्यु भएको हो । शनिवार मृत्यु भएको शिशुको खाल्डोमा पुरेर दाहसंस्कार गरिएको छ । बेथाले च्यापेपछि
१५ भाद्र २०७६, आईतवार १४:३१	१५ भाद्र २०७६, आईतवार १४:३१
हिडिरहेका मान्छेमाथि चट्याङ लाग्यो तर यसरी बाँचे (भिडियो)
चट्याङले धेरै मान्छेको ज्यान लिने गरेको छ । त्यसैकारण यसबाट जोगिन विभिन्न प्रविधिहरु पनि भित्रिएका छन्। चट्याङ यति बेजोडका साथ पर्छ त्यो कमैले मात्रै देख्न पाउछन्। दक्षिणी क्यारोलिनाका रोमुलस म्याकनिलले एउटा यस्तो घटनाको सामना गरे जुन हेर्दा नै डरलाग्दो छ
२ भाद्र २०७६, सोमबार १०:०७	२ भाद्र २०७६, सोमबार १०:०७